ဇူလိုင်လ ၁၁ရက်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်
တောင်သူဥွီးကြီးများ၏ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ သွင်းအားစုလိုအပ်မှုကို ပံပိုးပေးနိုင်ရန် Good Brothers Chemical Co.,Ltd ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ Yuntianhua Co.,Ltd မှ ထုတ်လုပ်သည့် ကွင်းသုံးကွင်း အမှတ်တံဆိပ် စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းများကို Yuntianhua Co.,Ltd နှင့် Good Brothers’ Co.,Ltd တို့ အကျိုးတူပူးပေါင်း၍ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသော Shwe Crop Nutrients Co.,Ltd မှတဆင့် တင်သွင်းပြီး ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချပေးသော လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။ မျိုးစေ့၊ ဓါတ်မြေဩဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ရွက်ဖျန်းဆေးများကို အဓိကဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျှက်ရှိပါသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၆ရက်၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်
G.B.S Agricultural Services Public Co., Ltd.(GBS လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဝန်ဆောင်မှု အများပိုင် ကုမ္ပဏီ လိမိတက်) ကို အစုရှယ်ယာရှင်ပေါင်း (၂၆၈)ဦးဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂၆)ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်လက်မှတ် ရရှိခဲ့ပါသည်။ မြေပြုပြင်ခြင်း၊ ထွန်ယက်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်းစသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၂ရက်၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်
တောင်သူဥွီးကြီးများ၏ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကကျသော ငွေကြေးလိုအပ်မှုကို ကူညီပေးနိုင်ရန် Good Brothers Micro Financing Co.,Ltd. ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဘဏ္ဌာရေး စီစစ်ရေး ဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်ကို ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် ၀၂၄၀/၂၀၁၆ အမှတ်ဖြင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၁ရက်၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်
Kubota (G.B.S.) Co.,Ltd အား Kubota အမှတ်တံဆိပ် လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ISO 9001:2008 ဝန်ဆောင်မှု အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ကိုရရှိထားပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်
Yangon Wuling Diesel Engine Co.,Ltd ကို Good Brothers’ Co.,Ltd ၊ Changzhou Wujin Wuling Diesel Engine Co.,Ltd နှင့် Yunnan Xintianli Machinery Co.,Ltd များ အကျိုးတူ ပူးပေါင်း၍ ခွင့်ပြုချက်အမှတ် (၇၅၃ အက်ဖ်စီ/ ၂၀၁၃-၂၀၁၄) ဖြင့် ရွာသာကြီး၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၄ရက်၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်
United Agricultural Products Processing and Trading Co., Ltd.(စုပေါင်းလယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်) ကုမ္ပဏီခွဲကို ဧရာဝတီတိုင်း၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ် ဆားမလောက်ကျေးရွာတွင် စတင်တည်ထောင် ခဲ့ပါသည်။ ဆန်စက်လုပ်ငန်းနှင့် ဆန်စပါး တင်ပို့ရောင်းချသော လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ပြီး ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့လျှက်ရှိပါသည်။
မေလ ၂၈ရက်၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်
Three Swallows Construction Co., Ltd(ပျံလွှားသုံးကောင် ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်) ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနဲ့ပူးပေါင်း၍ မြို့တော် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ကူညီခဲ့သည်။
ဩဂုတ်လ ၂၇ရက်၊ ၁၉၉၈
ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၏ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီခွဲ တစ်ခုဖြစ်သည့် VSK International Co., Ltd. ကို လျှပ်စစ်ပစ္စည်းနှင့်ပန့် များ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီ အဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ Midea တံဆိပ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို အဓိကဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျှက်ရှိသည်။
ဇူလိုင်လ ၁၇ရက်၊ ၁၉၉၈
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသော ပုဂ္ဂလိကပိုင် လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်း စက်ရုံ Good Brothers Machinery Co.,Ltd ကို မန္တလေးမြို့၌ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် စက်ရုံစတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး စက်ပစ္စည်းများစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
စက်တင်ဘာ ၂ရက်၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ်
မန္တလေးမြို့ရှိ ညီအကို(၅)ဦးတို့မှ ပူးပေါင်းပြီး ယခင်မိသားစုပိုင် လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းကို Good Brothers' Co., Ltd. အဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းများအား စတင်ရောင်းချခဲ့ပါသည်။